Christian Karembeu oo si cad u sheegay xiddiga uu jeclaan lahaa inay la soo saxiixato Real Madrid – Gool FM
Christian Karembeu oo si cad u sheegay xiddiga uu jeclaan lahaa inay la soo saxiixato Real Madrid
Dajiye January 17, 2020
(Madrid) 17 Jan 2020. Halyeeyga kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Christian Karembeu oo dhawaan bixiyay wareysi dhinacyo badan taabanaya, ayaa wuxuu si qoto dheer kaga hadlay arrimo quseeya naadiga Los Blancos.
Waxyaabihii uu kaga hadlay halyeeyga reer France ee Christian Karembeu ayaa waxaa ka mid ahaa aragtidiisa kaga aadan xiddigaha ku sugan horyaalada waaweyn ee Yurub, laacibka uu jeclaan lahaa inay kala soo saxiixato kooxdiisa hore ee Real Madrid.
Karembeu ayaa si cad u sheegay inuu jeclaan lahaa in Real Madrid ay lasoo saxiixato xiddiga reer Senegal iyo kooxda Livrpool ee Sadio Mané, kaasoo uu u arko in wax badan uu ku soo kordhin karo Los Blancos.
Christian Karembeu ayaa la weydiiyay inta uu ku gudi jiray wareysigiisan su’aal aheyd xiddigee ayaad jeclaan laheyd in Real Madrid ay kala soo saxiixato ciyaartoyda ku sugan horyaalada waaweyn ee Yurub? wuxuuna ku jawaabay:
“Mané, Mané, Sadio Mané maxaa yeelay waa ciyaaryahan dhameystiran, xirfadle ah, wuxuu ku guuleystay abaal-marinta ciyaaryahanka ugu fiican Afrika”.
“Waxaan u maleynayaa inuu heysto dhamaan waxyaabaha u suurtogalinaya inuu u qalmo ka ciyaarista kooxda Real Madrid”.
Miyuu Valverde caqabad ku yahay heshiiska uu Pogba ugu biirayo Real Madrid? Mathias Pogba ayaa ka jawaabaya
RASMI: Kabtanka joogtada ah ee kooxda Manchester United oo la magacaabay